Home Wararka Dowladda Qatar oo shaacisay inuu Farmaajo Berri tegayo magaalada Doxa iyo Kulan
Dowladda Qatar oo shaacisay inuu Farmaajo Berri tegayo magaalada Doxa iyo Kulan
Dowlada Qatar ayaa shaaciyey socdaal Berri 5 Marsh 2022, ku tegayo Magaalada Doha ee dalkaasi Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Warkan oo ay qortay Wakaalada Wararka ee Qatar ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu maalinta berri oo Sabti ah booqasho shaqo ku tagi doono magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
“Amiir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa maalinta Axadda ah Amiri Diwan ku qaabili doona walaalkii Madaxweynaha Soomaaliya, iyagoo ka wadahadli doona xiriirka labada dal iyo sidii loo taageeri lahaa loona horumarin lahaa, iyadoo ay u dheer tahay arrimo dhowr ah oo khuseeya danaha guud”. ayaa lagu yiri warka Wakaalada Wararka dalka Qatar.
Socdaalkan ayaanay weli ka hadlin madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo si hordhac ahaan ah ay u shaacisay dowladda Qatar, taasoo aan hore u dhcii jirin.
Previous articleSarkaal Caawa lagu dilay Magaalada Beledweyne iyo Dableydii ka danbeysay oo la toogtay
Next articleAKHRISO: Magacyadda 16-ka xildhibaan ee maanta lagu doortay Magaalada Boosaso
Muxaadaradii wadaadka xag jirka ah ee Sheekh Umul oo gebi ahaanba...
[Deg Deg] Shir degdeg ah oo u socda Midowga Afrika &...